सिआईटीलाई 'मार्केट मेकर' बनाएपछि शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? - Aarthiknews
शुक्रबार, २३ साउन २०७७ Friday, 07 August, 2020
सिआईटीलाई 'मार्केट मेकर' बनाएपछि शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
विहीबार, ०१ फागुन २०७६
काठमाडौं । नागरिक लगानीकोष (सिआईटी)लाई मार्केट मेकर बनाएपछि यसको कस्तो असर पर्ला ? आम लगानीकर्ताले यस्तै प्रश्न राख्ने गरेका छन् । केही लगानीकर्ताले शेयर बजार अब बुलिस ट्रेण्डनमा जाने कुनै हालतमा पनि नघटने बताएका छन् । केही लगानीकर्ताले नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकर दिँदा पनि यसले बजारलाई खासै अर्थ नराख्ने बताउँदै आएका छन् ।
पूँजी बजार ठूलो आकारको भएकाले नागरिक लगानीकोषले लगानी गर्ने ५ अर्ब रुपैयाँको रकमले बजारलाई तल माथि गर्न सक्ने सम्भावना नभएकाले पनि बजारमा यसको प्रभाव नगन्य हुने शेयर विश्लेषकको भनाइ छ ।
नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको काम गर्न दिँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने र शेयर बजार बढन सक्ने शेयर बिश्लेषकले अनुमान गरेका छन् । निरन्तर ओरालो लागेर ११०० अंकको नजिकमा झरेको नेप्से अहिले बढेर १३५३.२९ अंकमा पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष शेयर बजारमा प्रवेश हुने हल्लाले बजार बढने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको छ ।
नागरिक लगानी कोष सहायक कम्पनीले शेयरबजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने, विक्री नभएको शेयर किन्ने जस्ता काम गर्ने भएकाले शेयर बजार धेरै नघटने स्टक ब्रोकरको भनाइ छ । उक्त कम्पनी स्थापनाले शेयरबजारमा स्थायित्व आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोष बाहेक सञ्चय कोषलगायतले पनि स्टक डिलरको काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले बजार अब कुनै हालतमा पनि घटन सम्भाबना नरहेको लगानीकर्ताको भनाई छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र व्यवसायी (दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४’ संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, सीआईटी, सञ्चयकोष जस्ता विशेष ऐनद्वारा स्थापित कम्पनीलाई स्टक डिलरको काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । त्यसपछि सीईआटीले स्टक डिलरको काम गर्न यो कम्पनी स्थापना गरेको हो । सीआईटीले स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गर्न पहिलेदेखि नै लबिङ गर्दै आएको थियो ।
बोर्डद्वारा संशोधित नियमावलीमा ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले अनुमति लिएर धितोपत्र दलाल वा व्यापारीको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ । अब उक्त कम्पनीले स्टक डिलरको काम गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनपर्ने छ, त्यसपछि मात्रा कम्पनीले स्टक डिलरको काम गर्न पाउनेछ ।
नागरिक लगानी कोषले शेयर किनबेच गर्ने उद्देश्यले छुट्टै स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरेको छ । सीआईटीको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी नागरिक स्टक डिलर कम्पनी बुधवार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको छ । यससँगै सीईआइटीलाई औपचारिक रूपमै स्टक डिलरको काम गर्ने बाटो खुला भएको हो ।
सीआईटीको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिएको उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र अधिकृत पूँजी १० अर्ब हुने भएको छ । त्यसमा सीआईटीले २ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नेछ । उक्त कम्पनीमा नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने सीईआटीको भनाइ छ ।
सीआईटीका अनुसार नेपाल टेलिकमले ४५ करोड र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ५० करोड शेयर लगानी गरेका छन् । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत शेयर भने सर्वसाधारण अर्थात् आईपीओमार्पmत जुटाइने सीआईटीको भनाइ छ । कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर १ अर्ब ५५ करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्ने सम्भावना छ ।
तीन कम्पनीको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
कुमारी बैंकद्वारा देवः विकास बैंकलाई प्राप्तीपश्चात कायम शेयर सूचीकृत
दुई कम्पनीको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको आईपीओमा मागभन्दा ५ गुणा बढी आवेदन
काठमाडौंका यी ठाउँमा आज र भोली बत्ती जाने
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर
सरकारी रकम श्रीमती र भतिजको खातामा राख्दा...
कोरोनाका कारण २१ वर्षीय युवकको मृत्यु
टिकटकमा प्रतिबन्ध लागाउने आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर
फोर्सफूल्ली मर्जरको लागि राष्ट्र बैंक तात्यो, आन्तरिक छलफल तिव्र
नुवाकोटमा आजदेखि ‘लकडाउन’
भारतमा कोरोना भयावह बन्दैः संक्रमितको संख्या २० लाख नाघ्यो, ४० हजारभन्दा बढीको मृत्यु
भदौ १ गतेदेखि हवाई उडान र लामो दुरीको यातायात खुल्छ ?
किन गरे फेसबुक र ट्विटरले ट्रम्पलाई कारबाही ?
नेपाल लाइफद्धारा १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मृत्यु दाबी भुक्तानी
नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा एक लाख कोरोना बीमा दावी भुक्तानी
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनको नयाँ मापदण्ड !
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ८७ कोरोना संक्रमित थपिए
१३२ वर्ष पुरानो धलौटको माना, पाथी र टुकी फेला पर्यो
सुनको मूल्य आज पनि तोलामा ११ सयले बढ्यो, कति छ आजको भाउ ?
प्रचण्ड निवासका ६ सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण